प्लस टु पछिकाे गन्तव्य-११
दिनेश गौतम काठमाडाैं, २७ साउन
कक्षा १२ पछि के पढ्ने ? कुन विषय पढेकाले के पढ्न पाउँछन् ? पढेपछि के बन्ने ? के कस्ता अवसर छन् ? विषय कसरी छनोट गर्ने ? नेपालमा के कस्ता विषयको पढाइ हुन्छ ? विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कुन विषय उपयुक्त हुन्छ ? यी र यस्तै प्रश्नलाई समेटेर कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई विषयको महत्त्व, सम्भावना, छनोट आदिका विषयमा सहयोग गर्न शिलापत्रले ‘प्लस टु पछिको गन्तव्य ’ स्तम्भ सुरु गरेको हो । विद्यार्थी र अभिभावकलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो स्तम्भ फलदायी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । आज हामीले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ (Electrical Engineering)बारे सामग्री तयार पारेका छौं ।
के हो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ ?
इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङले विद्युत् उत्पादनदेखि उपभोक्ताको घरघरमा विद्युत् प्रवाह गर्न सिकाउँछ । हाइड्रोपावर र सोलर पावरबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । विद्युत उत्पादनका लागि चाहिने उपकरण निर्माणबारे इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा पढाइन्छ ।
उत्पादित विद्युतलाई उपभोक्ताको घरघरमा जडान गर्ने प्रक्रियाका विषयमा पनि अध्ययन गरिने शिक्षा हो । अन्य देशमा इलेक्ट्रिकल सामान निर्माणको काम पनि यही कोर्समा समावेश गरिएको छ । तर, नेपालमा भने विद्युत उत्पादन र उत्पादन भएको विद्युत्लाई उपभोक्तामाझ पु¥याउने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
डिप्लोमा, ब्याचलर र मास्टर्स गरी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङका तीनवटा तह छन् । यीमध्ये स्नातक तह चार वर्षे कोर्स हो । जसमा आठ वटा सेमेस्टर छन् ।
प्लस टु पछिकाे गन्तव्यः कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढे अवसरै अवसर
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले यो कोर्स सञ्चालन गरेका छन् । एउटा कलेजलाई ४८ जनाको कोटा छुट्टाइएको हुन्छ । तर, भौतिक संरचना राम्रो भएको र क्याम्पसको क्षमताका आधारमा यो भन्दा बढी कोटा पनि दिइएको छ ।
अनिवार्य म्याथमेटिक्स लिएकोले
जीपीए सी प्लस ल्याएको
१० लाख खर्च गरेर पढ्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । कुल कोटाको १० प्रतिशतले छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । कोटा विश्वविद्यलयअनुसार फरक हुन्छ ।
४८ जनाको कोटा छ भने ४ जनाले छात्रवृत्ति पाउँछन् । विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षामा धेरै अंक ल्याउने र समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । एसईई र प्लस टु सरकारीमा पढेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, सेमेस्टरमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्ति दिइन्छ ।
ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्युबिसन
इन्टर्नसिप, प्राक्टिकल र प्रोजेक्टवर्क
इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ प्राक्टिकल कोर्स हो । यसको इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्छ । क्याम्पसहरूले दक्ष इन्जिनियर उत्पादन गर्न इन्टर्नसिप र प्राक्टिकललाई प्राथमिकता दिएका छन् । विभिन्न इलेक्ट्रिकल सम्बन्धित क्षेत्रमा भ्रमण पनि गराइन्छ । साथै प्रोजेक्टवर्क अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्युत् उत्पादनदेखि प्रयोग हुने सबै क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर मिल्छ । आफैं इलेक्ट्रोनिक्समा व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्नेका लागि पनि राम्रो छ । व्यक्तिको घरदेखि ठूला ठूला कम्पनीमा विद्युत् जडान गर्नुपर्ने भएकाले धेरै ठाउँमा काम गर्ने अवसर मिल्छ । जस्तै:
ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज, भक्तपुर
हिलसाइड इन्जिनियरिङ कलेज, बालकुमारी, ललितपुर
पोखरा युनिभर्सिटी स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, कास्की
अक्सफोर्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ, नवलपरासी
त्यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालयले अन्य कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छैन । यसले काभ्रेको धुलिखेलमा यो कोर्स सञ्चालन गरेको छ ।
जागरि खाने हो भने मासिक कम्तीमा ४० हजारदेखि माथि कमाउन सकिन्छ । आफ्नो क्षमता र दक्षताको आधारमा तलब बढ्दै जान्छ । यो प्राविधिक विषय भएकाले आफैं इलेक्ट्रोनिकसम्बन्धी व्यवसाय गर्ने हो भने लगानीअनुसारको आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका विकसित देश विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । पढ्दै कमाउन सकिने भएकाले ती देश रोजाइमा पर्ने गरेको हो । उनीहरू आफ्नै खर्चमा विदेश जाने गरेका छन् ।
मास्टर्स लेभल पढ्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर विद्यार्थी विदेश जान्छन् । विदेशमा १ लाख बढी कमाउन सकिने भएकाले पनि विद्यार्थीको रोजाइमा विदेशी भूमि परेको हो ।
इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको महत्त्व
बालकृष्ण सापकोटा, प्रधानाध्यापक, एड्भान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट
इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको माग बढेको छ । विद्युत् उत्पादनका लागि ठूलाठूला आयोजनाको काम सुरु भएको छ । त्यो क्षत्रमा काम गर्न दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । त्यस्तै, मानिसको घरदेखि ठूला ठूला कम्पनीमा विद्युत् जडान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ती क्षेत्रमा काम गर्न चाहिने जनशक्ति इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङले उत्पादन गर्छ । आफैं पनि केही गर्न सकिने भएकाले बेरोजगार बस्नुपर्दैन । नेपालजस्तो जलविद्युत्को सम्भावना रहेको देशमा यसको महत्त्व निकै छ ।
अबको युग इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको हो
महम्मद बदरुदोजा, विभागीय प्रमुख, पुल्चोक क्याम्पस
नेपाल लोडसेडिङबाट मुक्त भएको छ । यो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको देन हो । नेपालको आर्थिक स्रोत भनेको हाइड्रोपावर हो । प्रचुर मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने देश समृद्ध हुन धेरै समय लाग्दैन ।
विद्युत् उत्पादनको काम पनि भइरहेको छ । अन्य देशलाई विद्युत् बिक्री गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि काम गर्ने दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । ती जनशक्ति इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङले उत्पादन गर्ने हो ।
इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको आकर्षण
नयाँ प्रोजेक्टको आवश्यक
ललित नेपाली, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर
नाम र दाम दुवै हुने भएकाले यो कोर्सप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो । बेरोजगार बस्नुनपर्ने र जागिर नपाए आफैं केही गर्न सकिने भएकाले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढेको हो ।
यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । ललित नेपालीले एड्भान्स कलेजबाट इन्जिनियरिङ पढे । अहिले उनी त्यही कलेजमा पढाउँछन् ।
‘इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ नेपालमा धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ नयाँ प्रोजेक्ट नहुँदा समस्या भएको छ ।’ राज्यले सही नीति ल्याएर काम गर्ने हो भने हाइड्रोपावरबाट देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने उनको दाबी छ ।
सफलताका लागि डेडिकेट भएर लाग्नुपर्छ
लोचन यादव, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर
लोचन यादव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत छन् । सानैदेखि इन्जिनियर बन्ने उनको सपना थियो । डिप्लोमा कोर्स पनि उनले इलेक्ट्रिकलमै गरे । त्यसपछि स्नातक तहको कोर्स पनि यही विषयमा गरे । ‘नाम र दाम दुवै कमाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘डेडिकेट भएर लाग्ने हो भने सफल बन्न सकिन्छ ।’
सुबरात अर्याल, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर
सुबरात अर्यालले ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढे । १२ मा इलेक्ट्रिकलबारे थोरै जानकारी पाए त्यसैले उनले स्नातक तहमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पढे । केही वर्षअघि नेपाल लोडसेडिङको मारमा थियो ।
जलस्रोतको धनी भएर पनि लोडसेडिङका कारण हरेक क्षेत्र डामाडोल भएको थियो । विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ र देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गर्न सकिने उद्देश्यसाथ उनले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढेका हुन् । नेपालमै बसेर राम्रो कमाउन सकिनेमा उनी ढुक्क छन् ।
नेपालमा ८३ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । तर, लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताले विकास हुन सकेन । अहिले राष्ट्रिय गौरवका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ ।
सरकारले सातवटै प्रदेशबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश २ मा सोलरबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको योजना छ । यसका साथै देशका विभिन्न ठाउँमा जलविद्युत् आयोजनाको काम भइरहेको छ । देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने आधार भनेको हाइड्रोपावर हो ।
विद्युत् उत्पादन गरेर अन्य देशलाई बिक्री गर्ने लक्ष्यसमेत छ त्यसैले यी क्षेत्रमा काम गन दक्ष जनशक्ति आवश्यक भएकाले इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २७, २०७६, ११:४०:००